ZOMA 23 AOGOSITRA 2019
FIZAHANTANY AO MAHAJANGA : Raikitra ny hetsika « safari des oiseaux » andiany faharoa
Hotanterahina ny 3 ka hatramin’ny 08 novambra izao ao Ampitsopitsoka ny hetsika « safari des oiseaux » andiany faharoa izay karakarain’ny avy ao anivon’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Mahajanga. 25 octobre 2017
Raha ilay vorona antsoina hoe « Fotsy elatra » no natao famantarana ny hetsika tamin’ny andiany voalohany dia ilay vorona antsoina hoe voronosy kosa no hoentina amin’ity hetsika andiany faharoa ity.
Hetsika maro araka izany no hotanterahina ka anisan’izany ny fitsidihana ireo toerana ahafahana mijery ireo vorona mandalo ny sasany na mitoetra amin’io faritra io. Araka ny fanazavan’ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny fizahantany eto Mahajanga moa dia miisa 36 ny karazana vorona mandalo ao, 9 kosa ireo vorondrano, ary 6 ny vorona izay tsy hita raha tsy aty amin’ny faritry ny ranomasimbe indianina ka anisan’izany ilay vorona antsoina hoe voronosy.
Anisany hampiavaka ny hetsika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny amin’ny fampandraisana anjara azy ireo eo amin’ny varotra fampirantiana isankarazany.
Vahiny maro na teratany na avy ivelany araka izany no andrasana hitsidika eny an-toerana mandritra io 4 andro io.
Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 (138) 19 août 2019 Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra AMBOHIDRAPETO (114) 19 août 2019 Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA (109) 20 août 2019 Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT (105) 22 août 2019 Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy TONIA MPAMPANOA LALANA (78) 21 août 2019 Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko NOSY BE HELL-VILLE (74) 22 août 2019